Governemanta MAPAR : Manomboka ny fampihorohoroana -
AccueilRaharaham-pirenenaGovernemanta MAPAR : Manomboka ny fampihorohoroana
14/11/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nanapoaka « champagne » ry Andry Rajoelina sy ny forongony ny alin’ny 7 Novambra, ary efa nanambara fa lany “1er tour” hono izy ireo. Raha ny isan-jato navoakan’ny CENI tamin’ny 04 ora tolakandro teo anefa dia 38,98% ny an’i Andry Rajoelina, 37,17% kosa ny an’i Marc Ravalomanana…
Tsy tao anaty kajin’i Andry Rajoelina sy ny MAPAR velively ny fanohanan’i Mbola Rajaonah, filoha tale jeneralin’ny RLM Communication, izay ahitàna ny gazety La Ligne de Mire, La Dépêche, Le Citoyen, Triatra, Akon’i Madagasikara, On Air TV sy radio, AZ TV sy radio, La Chasse Info sy 24h Mada, ny kandidà laharana faha-25 tamin’ity fifidianana filoham-pirenena ity. Tsy azo ihodivirana intsony anefa ny fisoroana ny fihodinana faharoa hifanandrinan’i Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana, raha efa nanapoaka « champagne » aza ny sasany ny alin’ny 7 novambra lasa teo, nihevitra fa azon’izy ireo « 1er tour » ny fandresena.
Namoaka ny vaovao rehetra manodidina ny fifidianana, nanomboka tany amin’ny fampielezan-kevitra hatramin’ny famoahana ireo ampaham-bokatra vonjy maika ny vondrona RLM Communication, izay nandiso tanteraka ny vaovao niniana naely tamin’ireo hainoamanjery mpomba ny TGV, ny amin’ny fahalanian’i Andry Rajoelina « 1er tour ».
Ny faha-8 novambra ihany mantsy dia efa namoaka vaovao ny vondrona RLM Communication fa tafakatra hiatrika ny fihodinana faharoa ny kandidà laharana faha-25, Marc Ravalomanana. Mazava ho azy fa mbola hanohy ny asany, ary handray anjara mavitrika amin’ny famoahana vaovao manodidina ny fihodinana faharoa ny vondrona RLM, manomboka amin’ny fampielezan-kevitra izany hatrany amin’ny famoahana ny voka-pifidianana.
Manelingelina ny MAPAR sy ny forongony ny fanohanan’ny vondrona RLM Communication ny kandidà Marc Ravalomanana. Mampiasa ny hery sy ny fahefana eo am-pelatanany araka izany ny governemanta MAPAR, Andry Rajoelina, Mamy Ravatomanga, ny praiminisitra Ntsay Christian, ny ministry ny Atitany, haminganana sy hamotehana ireo izay manome tanana ny kandidà Marc Ravalomanana, ka isan’ny voalohany amin’izany ny filoha tale jeneralin’ny RLM Communication, Mbola Rajaonah.